Cacti - Kukura Zvinoenderana | Art sens - mazano eimba nebindu
Cacti - zvimiro zvekurima
18.10.2017 Yakatumirwa na: Art Sense
Iro bindu, Pfungwa Pamba, Zvirimwa, Maruva eimba
Mhuri: Cactaceae (Cactaceae).
Mhuri: Maodzanyemba neCentral North America.
Description: Cacti inouya akasiyana akasiyana maumbirwo, mavara uye mumvuri uye zvimwe zvezvinhu zvakanyanya kurerutsa dzimba, asi pane zvishoma mitemo yekuisa mupfungwa kana uchikura ivo. Mukudonha, vazorora. Pakati peino nguva, havadi kana mvura kana kujeka kana chikafu.
• Kuwedzera kwezuva
• Kugara uchidiridza muzhizha nekuomeswa kwakazara kwevhu
• Ichando munzvimbo inotonhorera, yakaoma munzvimbo isingasviki 10⁰C
Kana iwe ukaedza kukura cactus kamwe chete, saka hautombocherechedze kuti nzvimbo pane irinzvimbo haingasviki iwe iwe ... Imwe chipikiri: kana iwe uri mupfupi nzvimbo, kukunda iyo airpace. Rovedza fungidziro yako!
Mune mudziyo une urefu 3-5 cm, isa 1 cm peat, dururira jecha rakashambidzwa mumvura yakati wandei pamusoro. Dyara mhodzi nenzira iyi pasina kudzvara. Putira mudziyo muhomwe yepurasitiki, uise munzvimbo yakajeka uye inodziya (20 - 25⁰C) nzvimbo muchiedza chezuva.
Kuberekera: Cacti inonyanya kuve yakashambadzirwa zvinomera. Izvi zvinoitwa nekudzura rimwe bazi recactus. Izvi zvinoitwa mushure mekucheka muviri wecactus, iyo ine rhizome yakasimba. Matavi anobuda kubva pachigumbu, uye isu tinomata matavi aya.
Chiedza: Nepamunogona napo.
Kudiridza: Pakati pemwedzi inodziya inodiridzwa kamwe chete mazuva ese e10 uye mukati menguva inopisa yezhizha inodiridzwa kamwe chete mazuva mashanu. Munguva yechando zviri nani kusanwisa mvura kana kana ichadiridzwa mumazuva anodziya echando.
Fertilizing: Wedzera yakakwira potassium uye phosphorus fetiraiza (yemanyowa fetereza) vhiki mbiri dzese. Phosphorus uye potasiamu inomutsa kukura uye kuyerera kwecacti.
Ndeipi nzvimbo yakanyanya kunaka yekukura cacti?
Muzhizha, mahwindo ekumaodzanyemba haisiyo nzvimbo yakanakira yezvirimwa zvakawanda. Iwo chete maruva ane hutano hwakanaka anokwanisa kumira zuva rakananga pasina kupisa mashizha awo. Asi nzvimbo ino yakanakira yako cacti uye supulents. Munguva yechando, hwindo rekumaodzanyemba rinova ndiyo nzvimbo yakanakira chero imba yekudyara.
Kupfira kwemazuva ese nemvura yakapfava kwakanakira cacti uye zvinokurudzirwa zvidyarwa nemashizha asina mashizha.
Cactus inogona kutanga kuora munzvimbo yakareba yakanyorova. Mune ino kesi, ambulensi inodiwa. Chese chinhu chakatanga kuora chinofanira kutemwa. Iyo yekucheka nzvimbo inofanirwa kuomeswa kwemazuva akati wandei uye ipapo ndipo panofanirwa kudyarwa muvhu rakasununguka. Mumavhiki anouya, diridza kacactus nekuchenjerera kusvikira midzi yekutanga yaoneka.
Tsitsi dzerudzi (mudzi uye bvudzi)
mazano eacacti, mazano ezvirimwa, mazano emaruva, cactus, kumis, nyore, kukura nyore, chirimwa chiri nyore, vanozvidza, kurima, kurimwa kwecactus, kurimwa kwecactus, zvinomera, imba, maruva eimba, zvinomera zvakanaka, cactus mazano, maruva, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Pfungwa dzekushongedza kwetafura yechando
Dzimwe pfungwa dzekushongedza kwechando. Kufamba mupaki, tinogona kunakidzwa kunoshamisa ...
Iko kushongedza netii makenduru mune vase
Zvimwe zvezvakanaka kwazvo uye zvemhizha tafura yekushongedza ndeaya ane makenduru anoyerera vases. ...
Zviitire wega mubindu
Zvirimwa zvakasiyana zvebindu zvine zvinodiwa zvakasiyana zvekuchengeta. Kunyangwe iri ...
Bedhi mibhedha yakagadzirwa nekongiri zvidhinha
Kuzviitira iwe mabindu emibhedha yekongiri zvidhinha zviri nyore kuita uye ...
Drip kudiridza uye nepurasitiki bhodhoro
Pfungwa iri kuseri kwebhodhoro kudonhedzera kudiridza apa inobatsira nzira yekuchengetedza ...